Amandla ahlaziyekayo eMzantsi Melika | Ukuhlaziywa okuluhlaza
UTomàs Bigordà | | Amandla omoya, Photovoltaic Solar Amandla, Amandla elanga ashushu, Umoya ovuselelekayo
Kwiminyaka yakutshanje kwiLatin America ezininzi Uhlaziyo lwamandla ukukhokelela kuphuhliso olubonakalayo lwamandla ahlaziyekayo.
Eyona nto yayixhamlayo lelanga, netekhnoloji ehlaziyekayo ngoku ngexabiso eliphantsi kwaye ifikeleleke kwilizwe jikelele.
Umzekelo, eColombia amandla e-photovoltaic yinxalenye yenkqubo ebizwa PaZa uMsinga, esizisa ukukhanya nethemba kwiindawo ebezisithwe yiminyaka kungquzulwano ngezixhobo nokuthengiswa kweziyobisi.
Kwelinye icala, amazwe afana Chile ukuba ngo-2012 ilizwe beline-5MW kuphela yamandla elanga, namhlanje bane-362MW kunye ne-873 MW ezakhiwayo.
5 Amanye amazwe
Ngaphakathi kumazwe ahlukeneyo eLatin America, iChile yiyo ekhokelela ekubandakanyeni kolu hlobo lwamandla. Iingxelo ezininzi zibonisa ukuba “ngeemarike zayo ezomeleleyo zeenkonzo ezinkulu, iChile ikhokele lo mmandla kufakelo lwe-photovoltaic kwi-2014, emele ngaphezulu kwe ikota ezintathu zizonke ukusuka eLatin America ". Wongeza athi "kwikota yesine kuphela iChile efake kabini inani elipheleleyo lonyaka weLatin America ngo-2013.
Eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba iChile iqalile ngowama-2013 zinee-megawatts ezili-11 kuphela kumandla elanga afakiweyo. Isantya ilizwe eliqhubele phambili silibeke njengenkokeli yommandla, phambi kweMexico neBrazil, malunga nokukhula.
Ngapha koko, iChile ityale imali engaphezulu kwe- 7.000 iidola ezigidi kuphuhliso lwamandla avuselelekayo kule minyaka isixhenxe idlulileyo, ekwabandakanya i-biomass, umbane ophehlwa ngamanzi, umoya.
Umzekelo woku zingaphezulu kwe-80 iiprojekthi zelanga kunye nomoya ezivunyiweyo kule minyaka idlulileyo.
EArgentina nayo ebihleli ingenamdla kwaye ingenamdla kuhlaziyo oluhlaziyiweyo, sele iqalile ukwaphula umkhenkce kunye nokukhuthaza amandla elanga. EJujuy, umzekelo, kukho i-100% yedolophu yamandla elanga ebonakalise utshintsho olwenzekayo eArgentina. Ilizwe lilindele ukuvelisa i-8% yamatrix esizwe esisebenzisa amandla ahlaziyekayo kwiminyaka embalwa.
UMexico usungule kulo nyaka isigaba sokugqibela sesinye sezona zityalo zikhulu zelanga kwiLatin America. I-Aura Solar ndafakwa kwiBaja California Sur kwiinyanga nje ezisixhenxe kwaye ukusukela ngoSeptemba 2013 yaqala ukuguqula imitha yelanga ibe kukutshintsha okwangoku, esele ifikelela kwinxalenye yelizwe.
Kulo nyaka, isityalo siza kuvula ngokupheleleyo, sivelise amandla acocekileyo ukondla izigidi zabantu baseMexico. Izixhobo zayo zihlala Iihektare ezili-100 zeLa Paz Industrial Park. Urhulumente waseMexico uqaqambisa ukuba isityalo iAura Solar esineeseli ezili-131.800 ziya kunciphisa ungcoliseko ngamawaka angama-60 eetoni ze-CO2 ngonyaka.
Kananjalo amazwe anjengePeru akhuthaza ukusetyenziswa kwamandla elanga. Umceli mngeni wecandelo kukuzisa amandla kwi-2,2 yezigidi zabantu basePeru kwiindawo ezisemaphandleni ngokwandiswa kothungelwano kunye nezisombululo ezingaqhelekanga ezinje ngeepaneli zelanga, ekuza kuthi kunikezelwe inkxaso-mali, ukufakelwa, ukusebenza kunye nokulondolozwa kweprojekthi. .
En IPanama, Iinkampani ezingama-31 zithathe inxaxheba kwithenda yokuqala yokuthengwa kwamandla amakhulu elanga kunyaka ophelileyo. Iprojekthi ikhupha iithenda ezingama-66 MW nge utyalo mali malunga ne-120 yezigidi zeedola
Guatemale Inesinye sezona zityalo zinkulu ze-photovoltaic kwingingqi ene-5 MW yamandla kunye neepaneli ezingama-20 zamawaka elanga. Kule veki u-Eduardo Font, Umphathi Jikelele weshishini lamaphepha ePainsa, uthe bacwangcisa utyalo-mali lwe-12 yezigidi zeedola kwindawo ye-8MW yelanga.
Ibhanki yoPhuhliso yaseJamani (KFW) yanikezelwa El Salvado imali-mboleko yezigidi ezingama-30 zeedola kwimali-mboleko kwiinkampani zamandla amancinci naphakathi ezivuselelekayo, ngakumbi amandla elanga. URhulumente wase-El Salvador kunye neenkampani ezintathu zamandla ombane batyikitye izivumelwano ezine zokuvelisa kunye nokubonelela ngee-megawatts ezingama-94 zamandla elanga ngesixa esikufutshane ne-250 yezigidi zeedola.
Honduras Lelona lizwe likhokelayo kwilanga kuMbindi Merika kunye neyesithathu ekukhuleni kweLatin America. Ngexesha elifutshane, iseke izityalo ezilishumi elinambini zelanga kwiCholuteca nakweminye imimandla yelizwe.
Ngo-2013 i-China kunye icosta Rica utyikitye izivumelwano ze-30 yezigidi zeedola ukuxhasa ufakelo lweepaneli ezingama-50 zamawaka elanga. Ekuqaleni kwalo nyaka iZiko loMbane laseCosta Rican (ICE) labhengeza inkqubela yesicwangciso sokulinga sokusebenzisa amandla elanga ahlala kwindawo ajolise ukufikelela kubathengi abangamawaka angama-600. Kule minyaka ili-7 idlulileyo, I-1,700 yezigidigidi zeedola ziye zaTYALWA kwiiprojekthi zamandla ahlaziyekayo ezahlukeneyo (elanga, umoya, umbane ngamanzi, phakathi kwezinye).
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Umoya ovuselelekayo » Amandla ahlaziyiweyo eMzantsi Melika
ICepsa izakuphuhlisa ifama yayo yokuqala yomoya eAndalusia